पेटको अ*ल्सर – कारण, लक्षण, के खाने/नखाने के गर्ने/नगर्ने (अनिवार्य पढ्नुहोस् ) – Online Nepal
April 13, 2020 775
पेटको अल्सर कस्तो रोग हो ? पाचन प्रणालीसँग जोडिएको यो एउटा खास रोग हो । यसमा आमाशय, खाने नली या सानो आन्द्राको सुरुको भाग अर्थात डयुडिनम मा घाउ वा प्वाल हुन्छ ।पेटको अल्सर का कारणहरु के के हुन्?
१. धेरै मानसिक तनाव, चिन्ता, क्रोधमा रहनु, अनियन्त्रित खाना खानु । धेरै रक्सी पिउनु, खाली पेटमा दुखाइ हटाउने दबाइ खाने जस्ता बानीले आमाशयमाा घाउ हुन्छ जसलाई हामी अल्सर भनेर चिन्छौं ।
२. पेटको अल्सर का लक्षणहरु के के हुन्? यो रोगमा छाती वा नाभीको माथिपटिको भाग दुःखछ । खाली पेट वा खाना खाइसकेपछि पनि दुःख्छ, पोल्छ, बेचेनी हुन्छ, उल्टी गर्ने इच्छा हुन्छ, उल्टी भएपछि आराम मिल्छ, रगत छादनु, आन्तरिक रक्तश्राव हुनुको साथै कालो रंगको दिसा आउँछ
३.पेटको अल्सर लागिसकेपछि के के खाने ? खाना ५-६ पटक थोरै थोरै गरेर खाने । चिसो दुध एक पटकमा एक कप गरेर पटक पटक दिनमा ७-८ पटक खाने । खानामा दुध, दाल, विस्कुट, टोस्ट, भात, मुंगको दाल, साबुदाना, जाउलो, आरारोट,मक्खन खाने । अंगुर, पाकेको केरा, स्याउ, गाँजर खाने । प्रोटिनयुक्त पदार्थ, अण्डा पनिर, दाल आदि खाने ।
४. पेटको अल्सर लागि सकेपछि के के नखाने ? अत्याधिक तातो, चिसो खानाबाट टाढै बस्ने । खाना एक दुइ पटक मात्र धेरै नखाने । थोरै थोरै बारम्बार खाने कुरा खाइरहने । तातो खाना छिटो छिटो नखाने । पिरो, मसालेदार, चटपटे तरकारी, अमिलो मही र छाछ धेरै नखाने । रक्सी, गाढा रंग हालेको चिया कफी धेरै नखाने । एक पटकमा धेरै दुध नखाने । तारेको भुटेको खाना धेरै नखाने ।
५. रोग निवारणमा सहायक उपाय पेटको अल्सर लागिसकेपछि के के गर्ने ? खाना निश्चिन्त भएर विस्तारै चपाइ चपाई खाने । शारीरिक र मानसिक रुपमा आराम गर्ने बानी बसाउने । तनाव र चिन्ताा हटाउने र हास्नर खुशी रहन सिक्ने घर बाहिर काम गर्दा गर्दै पेट पोल्न थाल्यो भने २-४ वटा विस्कुट खाने । शरीरिक एवम् मानसिक शिथिलताको लागि शवासन गर्ने पेटको अल्सर लागिसकेपछि के के नगर्ने ? धेरै बेर भोकै बस्नुपर्ने मौका आउन नदिने । व्रतलिन छाडिदिने । मानसिक तनाव र चिन्तामा डुबेर बस्न छोडिदिने राती धेरैबेरसम्म नबस्ने । दुखाइ हटाउने दबाइ आफू खुशी नखाने । दिउँसो सुत्ने बानी नबसाउने । कालो चियाको प्रयोग विल्कुलै नगर्ने । साभारः दैनिक अनलाइनबाट ।
Prevकोरोनाको त्रास बढिरहेका बेला वीर अस्पतालका डाक्टरले गरे कमाल, दुनियालाई देखाईदिए नेपालीको पावर
Nextयी १० सपना जसले तपाइँलाई धन प्राप्तीको संकेत गर्छन् !